Twi (tw) subword embeddings
View Twi subword embeddings in TensorFlow Projector
original macedonia mmrahy0 b0dwa fie kesie abadwemfɔɔ nam oman no mmra a 0fa sukuu ho so na wɔdi bue sukuu yi wɔ afe apem aduonu wɔtwe (0000) mu . adesuafoɔ a
onini no buee n'anum, aku nyaa akokoduro de ne nsa sin no hyεε n'anum. onini no kaa nano too mu bεyɛ sima kakra na ɔsan buee n'anum. aku yii ne nsa fi
asantehene: asantehene a, ote asika dwa kokoo soo, ebeye mfie edu nie na obedii ne wofa, otumfuo opoku ware oto so mmienu adee. asanteman do won ahenf
1000 ▁macedonia ▁mm ra hy 0 ▁b 0 dwa ▁fie ▁k esie ▁aba d w em f ɔ ɔ ▁na m ▁oman ▁no ▁mm ra ▁a ▁0 fa ▁sukuu ▁ho ▁so ▁na ▁wɔ di ▁b ue ▁sukuu ▁yi ▁wɔ ▁afe ▁apem ▁aduon u ▁wɔ twe ▁( 0000 ) ▁mu ▁. ▁adesua foɔ ▁a
▁onini ▁no ▁bu ee ▁n ' anum , ▁aku ▁nyaa ▁ak o ko d uro ▁de ▁ne ▁nsa ▁s in ▁no ▁hy εε ▁n ' anum . ▁onini ▁no ▁kaa ▁nan o ▁too ▁mu ▁b ε yɛ ▁si ma ▁ka kra ▁na ▁ɔ san ▁bu ee ▁n ' anum . ▁aku ▁yi i ▁ne ▁nsa ▁fi
▁asantehene : ▁asantehene ▁a , ▁o te ▁asi ka ▁dwa ▁ko ko o ▁so o , ▁e be ye ▁m fie ▁edu ▁n ie ▁na ▁o be dii ▁ne ▁wo fa , ▁o tum fuo ▁o po ku ▁w are ▁o to ▁so ▁mmienu ▁ad ee . ▁asanteman ▁do ▁won ▁ahen f
3000 ▁macedonia ▁mmra hy 0 ▁b 0 dwa ▁fie ▁kesie ▁aba dwemfɔɔ ▁nam ▁oman ▁no ▁mmra ▁a ▁0 fa ▁sukuu ▁ho ▁so ▁na ▁wɔdi ▁bue ▁sukuu ▁yi ▁wɔ ▁afe ▁apem ▁aduonu ▁wɔtwe ▁( 0000) ▁mu ▁. ▁adesua foɔ ▁a
▁onini ▁no ▁buee ▁n ' anum , ▁aku ▁nyaa ▁ak okod uro ▁de ▁ne ▁nsa ▁sin ▁no ▁hy εε ▁n ' anum . ▁onini ▁no ▁kaa ▁nano ▁too ▁mu ▁b ε yɛ ▁sima ▁kakra ▁na ▁ɔsan ▁buee ▁n ' anum . ▁aku ▁yii ▁ne ▁nsa ▁fi
▁asantehene : ▁asantehene ▁a , ▁ote ▁asika ▁dwa ▁kokoo ▁soo , ▁ebeye ▁mfie ▁edu ▁nie ▁na ▁o bedii ▁ne ▁wofa , ▁otumfuo ▁opoku ▁ware ▁oto ▁so ▁mmienu ▁adee . ▁asanteman ▁do ▁won ▁ahen f
5000 ▁macedonia ▁mmrahy 0 ▁b 0 dwa ▁fie ▁kesie ▁abadwemfɔɔ ▁nam ▁oman ▁no ▁mmra ▁a ▁0 fa ▁sukuu ▁ho ▁so ▁na ▁wɔdi ▁bue ▁sukuu ▁yi ▁wɔ ▁afe ▁apem ▁aduonu ▁wɔtwe ▁(0000) ▁mu ▁. ▁adesuafoɔ ▁a
▁onini ▁no ▁buee ▁n ' anum , ▁aku ▁nyaa ▁akokoduro ▁de ▁ne ▁nsa ▁sin ▁no ▁hy εε ▁n ' anum . ▁onini ▁no ▁kaa ▁nano ▁too ▁mu ▁b ε yɛ ▁sima ▁kakra ▁na ▁ɔsan ▁buee ▁n ' anum . ▁aku ▁yii ▁ne ▁nsa ▁fi
▁asantehene : ▁asantehene ▁a , ▁ote ▁asika ▁dwa ▁kokoo ▁soo , ▁ebeye ▁mfie ▁edu ▁nie ▁na ▁obedii ▁ne ▁wofa , ▁otumfuo ▁opoku ▁ware ▁oto ▁so ▁mmienu ▁adee . ▁asanteman ▁do ▁won ▁ahen f